Ny efitrano fanaovan-tsary an'ny Van Gogh malaza ao Arles | Famoronana an-tserasera
Ho an'iza tsy te hiroboka ao anatin'ireny sanganasa ireny ianao kilasika hahitana izay holazain'ny maherifon'izy ireo satria mety hitranga any Las Meninas avy amin'i Velázquez lehibe io, na koa ao amin'ny iray amin'ireo an'i Renoir mba hifangaro amin'ny impressionisme sy ireo seho isan'andro an'ny fiaraha-monina mahery ao Rococo.
Mety ho azonao atao izany raha manofa efitrano amin'ny alàlan'ny Airbnb ianao. Ary, sambany tany Etazonia, ireo kinova telo amin'ilay sary hosodoko malaza Van Gogh avy amin'ny efitranony any Arles dia haseho any Chicago miaraka amin'ny sangan'asany hafa. Mba hankalazana ny fotoana dia namerina namorona ilay efitrano ny Art Institute of Chicago ary nanoratra azy io hofany amin'ny alàlan'ny Airbnb amin'ny $ 10 fotsiny.
Ity boaty ity dia iray amin'ireo solontena be indrindra an'ny manam-pahaizana momba ny sary hosodoko Van Gogh. Araka ny navoakan'ny Airbnb: «ity efitrano ity dia hahatonga anao hahatsapa ho toy ny mipetraka amin'ny sary hosodoko. Voaravaka amin'ny fomba post-impressionist, mampatsiahy ny atsimon'i Frantsa izay lany fotoana. Ny fanaka, ny loko mamirapiratra ary ny zavakanto dia hanome anao fiainana fiainana tena izy.»
toy izany raha sendra misy ny fiainana ho hitanao any Chicago fa afaka mandany alina majika tanteraka ao amin'ny efitrano iray ianao izay maka tahaka ilay iray amin'ny mpanao hosodoko tena tsara ao Arles. Efitra iray novolavolaina tanteraka tamin'ireny fiovana ireny sy ny fomba fijery manokana ka midika ho fahatsapana ao anaty sary hosodoko izany, araka ny aseho amin'ny sary omenay amin'ity lahatsoratra ity.
El rohy mankany Airbnb ary ny iray ho Art Institute of Chicago. ny tolo-kevitra tany am-boalohany sy tsy mampino izay azon'ny olon-drehetra idirana amin'ny dolara folo fotsiny nefa tsy mamela vola be hahafahany manonofy mandritra ny alina iray ao amin'ny efitrano iray mitovy amin'ny iray onenan'ilay mpandoko holandey lehibe.
Kely latsaka ny herintaona lasa izay Van Gogh amin'ny fidirana hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Namboarin'ireo mpanakanto ny efitrano malaza an'i Van Gogh ao Arles